Valentina Justice - Sinaanta Helitaanka Caalamiga
Agaasime, Maaliyad iyo Hawlgal, United States
Valentina Justice waxay u keentaa 20 sano oo waayo-aragnimo ah doorkeedii Agaasime EAI, Maaliyadda iyo Hawlgallada.
Valentina Justice waxay keeneysaa in kabadan 20 sano oo waayo-aragnimo ah doorka ay kahayd Agaasimaha EAI, Maaliyadda iyo Hawlgallada. Waxay dusha kala socotaa Maaliyadda iyo Xisaabaadka, Kheyraadka Aadanaha, Qandaraasyada iyo U hoggaansanaanta, iyo Qiimaha iyo Qiimaha.
Iyadu waa hoggaamiye xisaabeed heer sare ah isla markaana leh maaliyad khibrad u leh maareynta macaashka adduunka, iyada oo leh khibrad gaar ah oo ku saabsan horumarinta, hirgelinta, iyo hagidda kontaroolada maaliyadeed iyo geedi socodyada kor u qaada wax soo saarka. Valentina waxay aqoon u leedahay nidaamka maareynta lacagaha waaweyn iyo helitaanka, ku takhasusay aaladaha ilaha ganacsiga, nidaamyada maaraynta waxqabadka shirkadda, mushahar bixinta, iyo waqtiga iyo kharashyada. Waxay soo bandhigtay guul ku aaddan maaraynta qandaraasyada, deeqaha, iyo hawlgallada, waxayna leedahay faham qoto dheer oo ku saabsan u hoggaansanaanta abaalmarinta federaalka iyo maalgelinta aan federaaliga ahayn ee loogu talagalay ururrada dakhliga milyan-dollarka ah. Ka hor inta uusan ku biirin EAI bishii Maarso 2019, Valentina waxa ay 10 sano la qaadatay ACDI / VOCA, oo ay ugu dambeysay markii ay ahayd Madaxweyne kuxigeenka iyo Maareeyaha.
Waxay ku nooshahay Waqooyiga Virginia, waxay haysataa BS xagga Xisaabaadka iyo Nidaamyada IT-ga ee kuliyada Akadeemiyada Daraasaadka Dhaqaalaha ee Bucharest, Romania iyo MBA oo ka socota Jaamacadda Phoenix. Si aad ula xiriirto Valentina Justice, fadlan emayl ku soo dir vjustice@equalaccess.org.